Anosibe Angarangarana Tratra nivarotra heroine ilay Maorisiana
Lehilahy, teratany Maorisianina iray 50 taona no saron’ny misahana ny ady amin'ny zava-mahadomelina Anosy teny Anosibe Angarangarana afak’omaly 17 Mey tokony ho tamin'ny 06 maraina rehefa nivarotra héroïne.
Tratra tao an-tranony mihitsy ity tera-tany vahiny rehefa nokarohina sy nanaovan’ny Polisy ao amin'ny STUP fidinana ifotony. Teo am-pivarotana mihitsy izy no tratra. Nahitana kitapo iray nisy heroine milanja 250 grama izay efa voazarazara anaty fonosana kely miisa 250 tao aminy. Hita tao niaraka tamin'izany koa ny "mixeur" iray izay fitaovana fangaroana héroïne. Araka ny fanadihadihana natao taminy dia fantatra fa Afrikana iray no mamatsy héroïne azy ary izy indray no mivarotra azy avy eo. 60.000 Ar no hividianany ny 01 grama raha ny filazany hatrany. Efa nigadra 10 taona teny Tsiafahy izy ny taona 2011 ka hatramin'ny 2017 noho ity resaka fivarotana heroine ity ihany.